lundi, 17 août 2020 17:02
Behara- Amboasary Atsimo: Zanak’omby roa ny lohany
Ombivavy iray no teraka kambana saingy sampona satria niraikitra. Iray ny vatan’ilay zanak’omby, efatra ny tongony saingy roa ny lohany. Maty ilay zanak'omby.
Tao Behara Amboasary Atsimo no nitrangan'izy ity ny faran'ny herinandro teo.
Maro ireo orinasa na olon-tsotra nitrosa vola tamin'ny banky na micro-cred, izay nametraka antoka, nefa noho ny fahamehana ara-pahasalamana sy ny krizy nateraky ny valan'aretina Covid-19, dia very asa, na mikatona ny orinasa, dia tsy voaloa ireo trosa eny anivon'ny mpampindram-bola.
Nisy ny kabarin'ny Filoham-pirenena ny ampiatoana ny fitakiana ireo trosa, nefa tsy narahina didim-panjakana izany, ka dia mody manao be marenina ireo banky sy micro-cred.
Betsaka ireo tompon'ny orinasa no kivy sy miraviravy tanana, tsy mahita izay ho sarangotina, fa dia miandry ny fidonany sisa, misy ireo mamoifoy mihitsy aza, mandraiky marary.
lundi, 17 août 2020 15:55
17 août: Journée internationale du chat noir.
lundi, 17 août 2020 15:40
Masay – Antananarivo: Saron’ny Polisy ireo mpivarotra basy, mpidoroka zavamahadomelina
Nanaovan’ny Polisy avy ao amin’ny Kaomisaria Boriborintany faha8 Analamahitsy bemidina teny amin’ny rocade Masay iny. Nandritra izany no sarona ireo mpivarotra basy, mpidoroka zavamahadomelina ary koa ireo tanora mpitrifana amin’ny moto scooter. Miisa 13 no indray voasambotra.
lundi, 17 août 2020 13:54
Ambodivona-Antananarivo: Haintrano namoizana ain’olona
Nitrangana haintrano tetsy Ambodivona androany maraina. Lahy antitra iray 85 taona no tsy tafavoaka tao amin’ny trano, ka namoy ny ainy.
Fanambin’ny ekipan’ny Governora RAFIDISON Richard Théodore ny hametrahana « PEPINIERE AGRICOLE » isaky ny Distrika manerana ny Faritra Atsinanana. Ilaina tokoa mantsy izany amin’ny fanamby lehibe hanaparitaka voly avotra sy voly fanondrana isan-karazany sy hampitomboana ny velaran-tany voavoly.
Manomboka tsikelikely izany, ny DRAEP Atsinanana sy ny Sampana isaky ny Distrika koa moa efa nanomboka izany rahateo.